केपी ओलीका बडिगार्डको अकुत सम्पति , के छ स्रोत ! - jagritikhabar.com
केपी ओलीका बडिगार्डको अकुत सम्पति , के छ स्रोत !
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली निकट रहेर राजनीति गर्ने कार्यकर्तादेखि उनको सुरक्षामा कार्यरत अधिकारीहरुसम्मले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको खुलेको छ । सुर्य थापादेखि महेश बस्नेतसम्मले ओली सरकारको कार्यकालमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका छन् । महेश बस्नेतको नाममा हप्ता असुली गर्ने रुमेश कट्वाललाई मंगलबार नै महानगरीय प्रहरी अपराध महासाखाले पक्राउ गरेको छ । उनले जग्गा दिन्छु भनेर ६८ लाख रुपैयाँ ठगी गरेको पाइएको थियो ।